ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာများအားအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်ခြင်း Self- အစီရင်ခံတင်ပြသည့် Hypersexual အပြုအမူ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်မှု
comments: စစ်တမ်းအများအပြားသည်အခြားလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိတဲ့ဘုံဆောင်ပုဒ်အစီရင်ခံ: Porn / လိင်စွဲဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရကိုကွောကျရှံ့) နဲ့ပေါင်းစပ် သာ. ကြီးမြတ် arousabilty (သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်မတရားသော) သတင်းပို့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်:
ရလဒ်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟူသောအယူအဆကိုအထူးသဖြင့်ထောက်ခံသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexual ဟုသတ်မှတ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာအဖြစ်သုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုခံစားရနိုင်ပြီးဆက်လက်ပါ ၀ င်နိုင်သည် သူတို့ကိုယ်တိုင်မှသိသိသာသာအန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ထို့အပြင်ရလဒ်များယေဘုယျအားဖြင့်ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များအတွက်ဖြည့်ညှင်း၏မရှိခြင်းပေးထားသောသီးခြားအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် dual- ထိန်းချုပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulsivity နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity ၏သီအိုရီများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားခြင်း၊ SIS2 နိမ့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသော hypersexual အပြုအမူများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလက္ခဏာ impulsivity များအကြားသိသာထင်ရှားသည့်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများနှင့်ပတ်သက်သောကြိုတင်စာပေအစီရင်ခံစာများနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။ ထို့အပြင်ရလဒ်များပိုမိုမြင့်မားစိတ်ဓာတ်ကျစိတ်ဓါတ်များ, ပိုမိုမြင့်မားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်တိုးမြှင့် hypersexual အပြုအမူအကြားသိသိသာသာ cant အသင်းများ၏စာပေအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015 အောက်တိုဘာ 26 ။
ဝေါ်လ်တန် MT1, Cantor JM2, Lykins AD3.
"Hypersexual" အပြုအမူဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။ hypersexual အပြုအမူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ငံတကာမှ ၅၁၀ လိင်တူချစ်သူ၊ နှစ် ဦး သဘောတူလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားနမူနာအမျိုးသမီးအမည်မပါသောအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံသည့်မေးခွန်းလွှာဘက်ထရီကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်လိင် (အထီး) အပြင်, hypersexual အပြုအမူလိင်စိတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အစီအမံများ, စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်လိင်တားစီး, ရို impulsivity နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှစ်ခုလုံးအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, hypersexual အပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးအပေါ်နိမ့်ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော neuroticism နှင့် extraversion အပြင်သဘောတူညီမှုနှင့်အသိစိတ်ရှိမှုတို့ကလည်း hypersexual အပြုအမူကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာအကဲဖြတ်သည့်ကိန်းရှင်များအကြားအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများသည် hypersexual အပြုအမူအားသတင်းပို့ခြင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မျိုးစုံနှင့်အဓိကအားဖြင့်လွတ်လပ်သော taxa များဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းကြောင့် hypersexual အပြုအမူကိုသိသိသာသာမခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါ။ အဓိကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအင်္ဂါရပ်များသည် hypersexual အပြုအမူရှိသူများရှိနိုင်သည်။ လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
နိဒါန်း FROM မှကောက်နှုတ်ချက်
ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် dual-ထိန်းချုပ်မှုများ၏မော်ဒယ်များဟောကိန်းထုတ်, ဒါမှမဟုတ် hypersexual အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အပြန်အလှန်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ရှိကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (dual-ထိန်းချုပ်မှု), Impulse (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse), နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive) ၏ dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များ quantifying အားဖြင့် hypersexual အပြုအမူခန့်မှန်းအတွက်ဤသုံးပါးမော်ဒယ်များများ၏တရားဝင်မှုစူးစမ်း။
အဆိုပါ dual-ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ် hypersexuality ကရှင်းပြသည်လျှင်, ငါတို့သည် hypersexual အပြုအမူအပျက်သဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်အတူပတျသကျနှင့်အပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (Hypothesis 1) နဲ့ပတျသကျမယ်လို့တွေးဆ။ လိင် Impulse မော်ဒယ် hypersexuality ကရှင်းပြသည်လျှင်, ငါတို့သည် hypersexual အပြုအမူအပြုသဘောရို Impulse (Hypothesis 2) နဲ့ပတျသကျမယ်လို့တွေးဆ။ လိင် compulsive မော်ဒယ် hypersexuality ကရှင်းပြသည်လျှင်, ငါတို့သည် hypersexual အပြုအမူအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ် (Hypothesis 3) နဲ့ပတျသကျမယ်လို့တွေးဆ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ Hypothesis (စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive မော်ဒယ်၏မူလတန်းအစိတ်အပိုင်းများ) hypersexual အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (မူလတန်းအဆိုပါ dual-ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်၏အစိတ်အပိုင်းများ) နှင့်ရို Impulse (ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse မော်ဒယ်) နဲ့ဆက်ဆံမယ်လို့တွေးဆ 4) ။
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့် Impulse ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များပြင်းပြင်းထန်ထန် hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့တှေ့လြှငျ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဘို့ပိုမိုမြင့်မား propensity ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ (SIS2) ၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးဘို့အနိမ့် propensity နှင့်ပိုမိုမြင့်မားရို Impulse အားလုံးအပြုသဘော hypersexual အပြုအမူခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီ variable ကို hypersexual အပြုအမူမှအပြုသဘောပြန်ပြောပြဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်ပေမယ့်အောက်ပိုင်း SIS1 (စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်တားစီး) hypersexual အပြုအမူများကိုအဆိုးဆက်စပ်မယ်လို့အဆိုပါခန့်မှန်းချက်, အားမထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုပိုမိုမြင့်မားစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်နှင့်အဆင့်မြင့်စိုးရိမ်စိတ် hypersexual အပြုအမူတိုးမြှင့်ဖို့ related သောအယူအဆ supporting, hypersexual အပြုအမူမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါအပြန်အလှန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်မဟုတ်သလိုစိုးရိမ်စိတ်မအကဲဖြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များနှင့် hypersexual အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ဖြစ်သွားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တွေးဆမရပေမယ့်, ငါတို့နောက်ပိုင်းတွင်ရို Impulse လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး), ခံစားချက် (စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု), နှင့် hypersexual အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်းဖြတ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hierarchical ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်အလားတူစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှငျ့ပတျသကျသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များများအတွက်လက်ခံရရှိ, ရို Impulse အဆိုပါခန့်မှန်းအကဲဖြတ် variable တွေကိုနှင့် hypersexual အပြုအမူမဆိုအကြားဆက်ဆံရေးများပုံမှန်မဟုတ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့သည်လည်းမဆို Neo ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး domains များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များ, ခံစားချက်နှင့် hypersexual အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်းဖြတ်ရှိမရှိသီးခြားစီလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ကဖော်ပြထားဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာများကို Neo ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး domains များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များ variable တွေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် hypersexual အပြုအမူတစ်ခုခုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားပြသသည်။
ရလဒ်များအနေဖြင့်လိင်စွဲလမ်းမှုဟူသောအယူအဆကိုအထူးသဖြင့်ထောက်ခံသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexual ဟုသတ်မှတ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာအဖြစ်သုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုခံစားရနိုင်ပြီးဆက်လက်ပါ ၀ င်နိုင်သည် သူတို့ကိုယ်တိုင်မှသိသိသာသာအန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ထို့အပြင်ရလဒ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များအတွက်အလယ်အလတ်မရှိခြင်းပေးထားသော, သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် dual- ထိန်းချုပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulsivity နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsory ၏သီအိုရီများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ SIS2 နိမ့်ကျမှု (Bancroft et al ။ , 2003a, 2004; Winters et al, 2010) အကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာကြိုတင်စာပေအစီရင်ခံစာများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလက္ခဏာ impulsivity (Barth & Kinder, 1987; Kaplan, တိုးမြှင့် hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ရလဒ်များပိုမိုမြင့်မားစိတ်ဓာတ်ကျစိတ်ဓါတ်များ, ပိုမိုမြင့်မားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်တိုးမြှင့် hypersexual အပြုအမူများအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များ၏စာပေအစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီ (Bancroft & Vukadinovic, 1995; ။ Raymond et al, 2004; Reid & Carpenter, 2003) ။
တွေ့ရှိချက်များသည် hypersexual အပြုအမူအတွက်ကုသမှုခံယူရသူများသည်အသက် ၃၅ နှစ်အောက်အမျိုးသားများဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီသည် (Kafka & Hennen, 35; Langstrom & Hanson, 2003) ။ အံ့သြစရာမှာလေ့လာမှုအရသိသိသာသာ hypersexual အပြုအမူကိုတင်ပြသောအမျိုးသမီးများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၃ နှစ်သာရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည်စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာကိုဖြေဆိုခဲ့သောအမျိုးသမီးဘွဲ့ကြိုပါ ၀ င်သူများ၏အရေအတွက်အချိုးအစားကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ CSA ၏ထိန်းချုပ်မှု variable ကိုစိတ်ကျရောဂါနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များ, p \_ .2006 များအတွက် hypersexual အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြွရောဂါများ၏ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးခုဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များကိုဖြတ်ပြီးတစ် ဦး ချင်း hypersexual အပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြွရောဂါအတွက်သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်များသည်အထက်ပါစာပေများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ သို့သော်စုပေါင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကို, CSA နှင့်စိတ်ကြွရောဂါ (regression မော်ဒယ်များ၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှု 23 တွင်ဝင်ကြ၏) hypersexual အပြုအမူအတွက်ကှဲလှဲ၏ 05%, p \_ .2 ကရှင်းပြသည်။
အရမ်းအနည်းငယ်သင်တန်းသားများကိုစိတ်ကြွရောဂါအစီရင်ခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေ့လာမှုမှာ, စိတ်ကြွရောဂါနှင့် CSA တစ်ဦးချင်း hypersexual အပြုအမူဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါ။ CSA သူတို့ CSA ကြုံတွေ့ဖူးခြင်းရှိမရှိသင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးသောမေးခွန်းလွှာအပေါ်တစ်ခုတည်းကို item နှင့်အတူတိုင်းတာကြောင့်အပြင်, CSA နှင့် hypersexual အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏အစွမ်းသတ္တိကိုထိခိုက်ခဲ့ကြပေမည်။ ဒါဟာ CSA များအတွက် Single-item တခုကိုအတိုင်းအတာလုံလောက်စွာဒီဆောက်လုပ်ရေးတင်ပြချက်များသို့မဟုတ် Subtype ၏အမျိုးမျိုးအကဲဖြတ်ရန်မပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့အထူးစိတ်ကြွရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ် CSA တစ်သမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူလူဦးရေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထို့ပြင်ဤဆက်ဆံရေးအားကောင်းခဲ့ကြပေမည်။
ပိုမိုမြင့်မားသော SIS1 hypersexual အပြုအမူခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်အတန်ငယ်အပြန်အလှန်အားဖြစ်ပုံရသည်; သို့သော်အချို့သောသုတေသနစွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးယောက်ျားအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေသည် (Bancroftet အယ်လ်။ , 2003a, 2009) ကြောင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို hypersexual အပြုအမူတွေအကြားဘုံရှိပါတယ်, ဒါကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အချို့သော hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပျက်ကွက်၏ဆက်စပ်ခြိမ်းခြောက်မှုလျော့ပါးရန် (ဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သာ. ကြီးမြတ်လိင်အင်္ဂါအာရုံ၏) အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့ပြင်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ် hypersexual အပြုအမူများ၏ခိုင်ခံ့ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်နှင့် SIS1 များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များကညွှန်ပြအဖြစ်ထို့ကြောင့်အချို့သော hypersexual သင်တန်းသားများ, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်နိုင်သည်။
စုပေါင်းခြင်း, ရလဒ်များကို hypersexual အပြုအမူမျက်နှာစာကြောင်းအကြံပြု; ကအလားတူအပြုအမူသုံး (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်ပိုပြီး) ၏တဦးတည်းကနေတဆင့်အကြောင်းကိုလာ taxa ဖြစ်နိုင်သည်: ပထမဦးစွာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့အ hypersexual အပြုအမူအကောင်းဆုံး dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြပွဲကျရောက်နေတဲ့အဖြစ်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုဆွဲဆောင်မှုလူတစ်ဦး၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်ယေဘုယျလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည့်အခါဤအ hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များပိုမိုလွယ်ကူစွာလိင်နှိုးဆွဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့ပြင်ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့များပါတယ်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများအားဖြင့်နှိုးဆွခြင်း, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းရှိသည်ကြားနေလူမှုရေး interaction ကအနက်ကိုဘော်ပြ။ ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်စပ်လျဉ်းအချို့ hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်အခက်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးဖို့လေးစားမှုနဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း arousal ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့များပါတယ်အချို့ hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်မှလျော့နည်းဖြစ်များပါတယ် ဒီအခြားသူများအမှတ်တမဲ့ကြားသို့မဟုတ်ဥပမာ, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်စာချုပ်ချုပ်များ၏အန္တရာယ်ခံရကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိအပြုအမူ-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးဆက်များအကြောင်းကို။ ယုတ္တိနည်းသောကြောင့်လည်းထိုကဲ့သို့သော hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များအပြုသဘော, အချိန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏သိသာထင်ရှားသောပမာဏဖြုန်းကူးယဉျနှင့်အထွေထွေလူဦးရေရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆွေမျိုးထုတ်ရှာကြံနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဘို့မိမိတို့လိုလားသောဆက်ဆံရေးကိုအားဖြည့်ဖို့များပါတယ်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။
အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒုတိယ, အခြားအုပ်စု hypersexual အပြုအမူအကောင်းဆုံး သာ. ကြီးမြတ်ရို Impulse အဖြစ်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ ဤသည်အခြားလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပါဝင်မှုစဉ်အတွင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအဖြစ်အဓိကအားဖြင့်တိုက်ပိတ်အပြုအမူနှင့်အတူဖြစ်စေ, အဘယ်သူ၏စရို Impulse သူတို့ရဲ့ hypersexual အပြုအမူတစ်ခုမူလတန်းကားမောင်းသူဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါး (Giugliano, 2009) တွေ့ကြုံခံစားရန်နောက်ခံလိုအပ်ချက်ရှိရှိကွောငျးအကြံပြု အမည်မသိအွန်လိုင်းချက်တင် site ကိုပါ။ ထို့ပြင်ယင်းသို့ hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများထုတ်ရှာကြံနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်သာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်သိမြင်အတွေးပြပါလိမ့်မယ်။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် hypersexual အလိုဆန္ဒ၏ထွက်လာပါတယ်အဆိုပါအလိုအလျောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့် hypersexual အပြုအမူ (ဥပမာကြားဆက်ဆံရေးပျက်ပြား) ၏အလားအလာဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များအဘို့အပြအနည်းငယ်သာထည့်သွင်းစဉ်းစား၏ဆင်းရဲသားကို Self-စည်းမျဉ်းအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အချို့သောလိင်စိတ်ဆန့်ကျင်သူများအတွက်၊ လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ကိုသက်သာစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆိုင်ရာအတွေးများနှင့်ရုပ်ပုံများအဖြစ်အစပြုနိုင်သည်။ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုခြင်းများသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုလျော့ပါးစေရန်မောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် hypersexual ပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်မှုတိုးတက်ခြင်းသည်ခေတ္တယာယီဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ လက်သမား, & Hardy, 2011) ။ အချုပ်အားဖြင့်ရလဒ်များအနေဖြင့်စုပေါင်းဖော်ပြချက်အရမည်သည့်အလားအလာရှိသည့် taxa များသည်မည်သည့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏အပြုအမူကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြသည်ကို hypersexual အပြုအမူအားကုသပေးသောဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်အဓိကကျနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။